Onyankopɔn Betumi De Yɛn Bɔne Akyɛ Yɛn Anaa? | Bible Nsɛmmisa
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Korean Lingala Lithuanian Luo Malagasy Myanmar Ngabere Norwegian Nzema Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Uruund Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zulu
Yebetumi asɔ Onyankopɔn ani; ɛmmoro yɛn ahoɔden so
Bible ka sɛ nnipa nyinaa yɛ abɔnefo. Yɛn nyinaa fi onipa a odi kan, Adam mu, enti ɔde bɔne awo yɛn. Ɛno nti, ɛtɔ da a yɛyɛ bɔne na akyiri yi yɛanu yɛn ho. Onyankopɔn Ba Yesu Kristo awu de apata yɛn bɔne. N’afɔrebɔ wu no nti, yetumi nya bɔne fafiri. Eyi yɛ akyɛde a efi Onyankopɔn hɔ.—Kenkan Romafo 3:23, 24.
Nnipa binom ayɛ bɔne akɛse atia Onyankopɔn, na wosuro sɛ ebia ɔremfa nkyɛ wɔn. Nanso, biribi wɔ Onyankopɔn Asɛm mu a ɛma yɛn ani gye. Ɛka sɛ: “Yesu mogya hohoro yɛn ho fi bɔne nyinaa ho.” (1 Yohane 1:7) Sɛ mpo obi yɛ bɔne a emu yɛ duru, na sɛ onu ne ho paa a, Yehowa yi ne yam de kyɛ no.—Kenkan Yesaia 1:18.
Dɛn na ɛsɛ sɛ yɛyɛ na Onyankopɔn de yɛn bɔne akyɛ yɛn?
Sɛ yɛpɛ sɛ Yehowa Nyankopɔn de yɛn bɔne kyɛ yɛn a, ɛsɛ sɛ yesua ne ho ade hu n’akwan, n’afotu, ne nea ɔpɛ sɛ yɛyɛ, na yɛte ase yiye. (Yohane 17:3) Yehowa yam ye, enti sɛ obi yɛ bɔne na ɔyere ne ho sɛ ɔbɛsesa a, ɔde ne bɔne kyɛ no.—Kenkan Asomafo Nnwuma 3:19.
Yebetumi asɔ Onyankopɔn ani; ɛmmoro yɛn ahoɔden so. Yehowa nim sɛ yɛyɛ mmerɛw. Ɔyɛ mmɔborɔhunufo a ne yam ye. Wohwɛ sɛnea n’adɔe dɔɔso no a, wunhu sɛ ɛsɛ sɛ wusua ne ho ade pii na wuhu nea woyɛ a, ɛbɛsɔ n’ani?—Kenkan Dwom 103:13, 14.